မနျခကျြစတာဒါဘီအောငျပှဲအပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့ အကွီးမားဆုံးနောငျတကို ဖျောထုတျလိုကျတဲ့ ယူနိုကျတကျ ဂန်တဝငျကစားသမား – Sports A2Z
ယူနိုကျတကျ ဂန်တဝငျကစားသမားကွီး ရီယို ဖာဒီနနျက အသငျးဟောငျးရဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီအောငျပှဲအပွီးမှာတော့ ဒီနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျ ဘောလုံးရာသီအတှငျး ယူနိုကျတကျအသငျးကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အကွီးမားဆုံးနောငျတတရပျကို ဖျောထုတျသှားခဲ့ပါတယျ။
အီတီဟတျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲစဉျမှာ ယူနိုကျတကျဟာ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ၂၁ ပှဲ နိုငျပှဲဆကျစံခြိနျကို ရပျတနျ့ကာ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျဖို့ မနျစီးတီးရဲ့မြှျောလငျ့ခကျြကို ရိုကျခြိုးသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျဟာ မနျခကျြစတာဒါဘီ ပထမအကြော့အိုးထရကျဖို့ဒျမှာ မနျစီးတီးအသငျးကို ဧညျ့ခံကစားခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးမရှိ သရရေလဒျသာ ထှကျပျေါခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျပရိသတျတှေ အားမလိုအားမရ ဖွဈခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာ ဖာဒီနနျလညျး ပါဝငျနပေါတယျ။
” တခါတရံမှာ ခငျဗြားအနနေဲ့ လုပျနိုငျသမြှ အကုနျလုပျပွရတယျ။ ကိုယျဘာလုပျမလဲဆိုတာကို ရဲရဲကွငွောရတယျ။ ကိုယျ့လုပျနိုငျစှမျးကို အမိအရဖကျတှယျထားရတယျ”
” ငါတို့က ခနျြပီယံဆုကို ဗိုလျဝငျခံမယျ့အသငျးကှ…. ဒီလို အရှိနျအဝါကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတျဖျောပွသရတယျ။ ကိုယျ့ခွစှေမျးကို အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျတဲ့အသငျးက ပွိုငျဘကျတိုငျးကို တပျလှနျ့ပွီးသားဖွဈတယျ”
” ဒီတပတျ မနျခကျြစတာဒါဘီအောငျပှဲမှာ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ စိတျမောခဲ့ရတာ တခုရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါက ယူနိုကျတကျဟာ ပထမအကြော့ အိုးထရကျဖို့ဒျအိမျကှငျးမှာ အခုလို ပေါကျကှဲပွီး ပွငျးပွတဲ့ခွစှေမျးနဲ့ ဘာကွောငျ့မကစားခဲ့ရသလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီတပတျမှာ ပွသခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့အမွငျ့ဆုံးစှမျးဆောငျရညျမြိုးကို အဲဒီအခြိနျကတညျးက ကြှနျတျောမွငျခငျြခဲ့တာဗြ”
” ဒီနလေို့ ခှနျအားမြိုးနဲ့သာ ယူနိုကျတကျက အဲဒီအခြိနျကတညျးက ပွငျးပွငျးပွပွ ကစားခဲ့ရငျ ကြှနျတျောတို့အသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို အပိုငျသိမျးမယျ့အသငျးလို့ အင်ျဂလနျမှာ မောငျးခတျကွငွောပွီး တံဆိပျတုံးထုလိုကျသလိုကို ဖွဈခဲ့မှာဗြ။
” အဲဒီတုနျးက ကွောကျကွောကျနဲ့ ကစားနခေဲ့တာကို မသကျမသာမွငျခဲ့ရတယျ။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ မနျစီးတီးကို ခွစှေမျးပွပွီး အနိုငျပိုငျးနိုငျခဲ့ရငျ ဒီနဆေို့ရငျ ပရီးမီးယားလိဂျကို အရယူဖို့ ယုံကွညျခကျြတှေ ပွညျ့လြှံနရေုံပေါ့ဗြာ။ ရလဒျတှေ ဆကျတိုကျထိုးတကျလာခဲ့မှာပေါ့။”
” အခုတော့ ကြှနျတေျာ့တို့အသငျးက အဲဒီအခှငျ့အရေးကို လကျထဲက လှတျကခြဲ့ပွီး လကျရှိမှာ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုအတှကျ အတျောလေးရုနျးကနျရပါတော့မယျ။ ”
” အခု ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အဆငျ့ ၂ နရောကို နောကျကအသငျးတှေ လိုကျလုဖို့ကွိုးစားနကွေပွီမဟုတျလား။ အဲဒါဟာ ဒီဇငျဘာမှာကစားခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲစဉျကတညျးက ကြှနျတျောတို့အသငျးဟာ ထငျသလောကျ မမာကြောဘူးဆိုတာ သိသှားခဲ့လို့ သူတို့ဘကျက မီရာကားနဲ့ လိုကျလာခဲ့ပွီး သူတို့မှာလညျး အခှငျ့အရေးရှိကွောငျး လကျခံသှားကွလို့ပဲ….. ခငျဗြားသိလား”
” တရာသီလုံး ကစားမယျ့ ပေါကျကှဲအားနဲ့ ယူနိုကျတကျဘာလဲဆိုတာပွသမယျ့ စိတျဓာတျအား၊ ခံယူခကျြဆိုတာဟာ အဲဒီပှဲမှာကတညျးက တှနျးအားဖွဈပွီး အလှညျ့အပွောငျးဖွဈခဲ့ရမှာဗြ။ အခုအခြိနျမှာ ဖလားသိမျးဖို့ ကြားတကောငျလို မာနျဖီဟိနျးဟောကျနရေုံပဲ။ လကျရှိမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ကြှနျတျောတို့လကျလှတျခဲ့ရပွီဆိုတာကို အရှိအတိုငျးလကျခံရမှာပါ”
” ရယျစရာကောငျးတာတခုကတော့ဗြာ… ကြှနျတျော ယူနိုကျတကျမှာကစားခဲ့တုနျးက အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ၄၉ ပှဲဆကျရှူံးပှဲမရှိစံခြိနျကို ရိုကျခြိုးခဲ့သလိုပဲ အခုယူနိုကျတကျကလညျး ၂၅ ပှဲဆကျ အနိုငျမှတျတမျးနဲ့ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျဖို့ မြှျောလငျ့နတေဲ့ မနျစီးတီးကိုလညျး တခကျြတညျးနဲ့ အပွီးဆှဲနှုတျခဲ့ပွနျပွီဗြ။ သူတို့အသငျးကို ရပျတနျ့ပဈခဲ့တယျ။ မသိရငျ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျဆိုတာ ပှဲခံနတေဲ့ သူမြားတကာပြျောရှငျမှုကို လိုကျဖကျြဆီးနသေလို ဖွဈနပွေီဗြ။ ဟုတျပါတယျ… ကြှနျတျောတို့က အဲဒီလိုလုပျတဲ့အသငျးစဈစဈပါ။” လို့ ရီယို ဖာဒီနနျက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး ရီယို ဖာဒီနန်က အသင်းဟောင်းရဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီအောင်ပွဲအပြီးမှာတော့ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးရာသီအတွင်း ယူနိုက်တက်အသင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြီးမားဆုံးနောင်တတရပ်ကို ဖော်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အီတီဟတ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက်ဟာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ၂၁ ပွဲ နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်ကို ရပ်တန့်ကာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့ မန်စီးတီးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို ရိုက်ချိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ မန်ချက်စတာဒါဘီ ပထမအကျော့အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းကို ဧည့်ခံကစားခဲ့ပေမယ့် ဂိုးမရှိ သရေရလဒ်သာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာ ဖာဒီနန်လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
” တခါတရံမှာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ လုပ်နိုင်သမျှ အကုန်လုပ်ပြရတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို ရဲရဲကြေငြာရတယ်။ ကိုယ့်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အမိအရဖက်တွယ်ထားရတယ်”
” ငါတို့က ချန်ပီယံဆုကို ဗိုလ်ဝင်ခံမယ့်အသင်းကွ…. ဒီလို အရှိန်အဝါကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ်ဖော်ပြသရတယ်။ ကိုယ့်ခြေစွမ်းကို အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်တဲ့အသင်းက ပြိုင်ဘက်တိုင်းကို တပ်လှန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်”
” ဒီတပတ် မန်ချက်စတာဒါဘီအောင်ပွဲမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စိတ်မောခဲ့ရတာ တခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက ယူနိုက်တက်ဟာ ပထမအကျော့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်အိမ်ကွင်းမှာ အခုလို ပေါက်ကွဲပြီး ပြင်းပြတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ ဘာကြောင့်မကစားခဲ့ရသလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီတပတ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်မြင်ချင်ခဲ့တာဗျ”
” ဒီနေ့လို ခွန်အားမျိုးနဲ့သာ ယူနိုက်တက်က အဲဒီအချိန်ကတည်းက ပြင်းပြင်းပြပြ ကစားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို အပိုင်သိမ်းမယ့်အသင်းလို့ အင်္ဂလန်မှာ မောင်းခတ်ကြေငြာပြီး တံဆိပ်တုံးထုလိုက်သလိုကို ဖြစ်ခဲ့မှာဗျ။
” အဲဒီတုန်းက ကြောက်ကြောက်နဲ့ ကစားနေခဲ့တာကို မသက်မသာမြင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မန်စီးတီးကို ခြေစွမ်းပြပြီး အနိုင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ကို အရယူဖို့ ယုံကြည်ချက်တွေ ပြည့်လျှံနေရုံပေါ့ဗျာ။ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက်ထိုးတက်လာခဲ့မှာပေါ့။”
” အခုတော့ ကျွန်တော့်တို့အသင်းက အဲဒီအခွင့်အရေးကို လက်ထဲက လွတ်ကျခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက် အတော်လေးရုန်းကန်ရပါတော့မယ်။ ”
” အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆင့် ၂ နေရာကို နောက်ကအသင်းတွေ လိုက်လုဖို့ကြိုးစားနေကြပြီမဟုတ်လား။ အဲဒါဟာ ဒီဇင်ဘာမှာကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာ ထင်သလောက် မမာကျောဘူးဆိုတာ သိသွားခဲ့လို့ သူတို့ဘက်က မီရာကားနဲ့ လိုက်လာခဲ့ပြီး သူတို့မှာလည်း အခွင့်အရေးရှိကြောင်း လက်ခံသွားကြလို့ပဲ….. ခင်ဗျားသိလား”
” တရာသီလုံး ကစားမယ့် ပေါက်ကွဲအားနဲ့ ယူနိုက်တက်ဘာလဲဆိုတာပြသမယ့် စိတ်ဓာတ်အား၊ ခံယူချက်ဆိုတာဟာ အဲဒီပွဲမှာကတည်းက တွန်းအားဖြစ်ပြီး အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရမှာဗျ။ အခုအချိန်မှာ ဖလားသိမ်းဖို့ ကျားတကောင်လို မာန်ဖီဟိန်းဟောက်နေရုံပဲ။ လက်ရှိမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ကျွန်တော်တို့လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီဆိုတာကို အရှိအတိုင်းလက်ခံရမှာပါ”
” ရယ်စရာကောင်းတာတခုကတော့ဗျာ… ကျွန်တော် ယူနိုက်တက်မှာကစားခဲ့တုန်းက အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ၄၉ ပွဲဆက်ရှူံးပွဲမရှိစံချိန်ကို ရိုက်ချိုးခဲ့သလိုပဲ အခုယူနိုက်တက်ကလည်း ၂၅ ပွဲဆက် အနိုင်မှတ်တမ်းနဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ မန်စီးတီးကိုလည်း တချက်တည်းနဲ့ အပြီးဆွဲနှုတ်ခဲ့ပြန်ပြီဗျ။ သူတို့အသင်းကို ရပ်တန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ မသိရင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဆိုတာ ပွဲခံနေတဲ့ သူများတကာပျော်ရွှင်မှုကို လိုက်ဖျက်ဆီးနေသလို ဖြစ်နေပြီဗျ။ ဟုတ်ပါတယ်… ကျွန်တော်တို့က အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အသင်းစစ်စစ်ပါ။” လို့ ရီယို ဖာဒီနန်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။